Telo lahy nosamborin’ny UIR … : andian’olona nitaky fitsaram-bahoaka teny amin’ny kaomisaria 67 Ha | NewsMada
Telo lahy nosamborin’ny UIR … : andian’olona nitaky fitsaram-bahoaka teny amin’ny kaomisaria 67 Ha
Andian’olona maromaro, nitangorona teny amin’ny kaomisaria 67 Ha omaly maraina, nitaky famoahana lehilahy iray notazonina teny an-toerana, mba hanaovana fitsaram-bahoaka. Voafehy ihany izany ary olona telo voasambotra omaly.
Raikitra ny tabataba teny anoloan’ny kaomisarian’ny boriborintany fahafito 67ha, mba hamoahana lehilahy iray tazonina hanaovana famotorana, noho ny resaka tsindron’antsy. Voalaza fa nisy mihitsy ny tora-bato tamin’izany, ka fiara iray no nisy fahasimbana. Efa niatrana teny an-toerana kosa ny polisy niaro ny kaomisaria, saingy tsy nampiasa hery mihitsy fa niezaka nandamina ny zava-nitranga.
Ireo olona, tetsy andaniny, nitabataba nitaky fitsaram-bahoaka, ary natahorana ny mety ho fitroaran’izy ireo tampoka. Niteraka fitohanan’ny lalana sy savorovoro izany ka tonga teny an-toerana ireo polisy avy amin’ny hery vonjy taitra nandamina ny raharaha. Niroso tamin’ny fisamborana ny mpitandro filaminana, ka telo lahy voasambotra tamin’izany, ary nalefa teny amin’ny kaomisaria Tsaralalana avy hatrany. Ireo olona kosa naparitaka ary nitsoaka niala teny an-toerana raha vao nisambotra ny polisy niaraka tamin’ny basy sy saron-tava.
Araka ny fanazavana, nisy lehilahy niady teny Andohatapaneka voalohany, omaly maraina ihany. Nifanindrona antsy ireo ka voa ny iray ary naratra mafy izay voatery nentina tany amin’ny hopitaly. Voasambotry ny polisy kosa ilay nanindrona antsy ary nentina teny amin’ny kaomisaria boriborintany fahafito mba hanaovana famotorana. Nanaraka tany ireo olona teny Andohatapenaka ary ireo nitaky fitsaram-bahoaka ireo. Voafehy ihany anefa izany, ary nilaza ny avy amin’ny polisy fa nanao ny asany mba tsy hitrangan’ny fitsaram-bahoaka, omaly.
Loza mitatao eto an-dRenivohitra ny fitsaram-bahoaka, ary io efa saika nitranga teny 67 ha io. Toy ny areti-mifindra izy ity ary mahazo vahana tsy misy fanefitra sy sarotra fehezina hatreto. Fandikan-dalàna ny famonoan’olona na toy inona endriny. Tsy vitsy koa anefa ny milaza fa ireo mbola tsy sendra ny jiolahy na izay mahavanon-doza amin’ny fianakaviany no milaza fa tsy ilaina ny fitsaram-bahoaka. Marina izany, endrika tsy fahatokisana intsony ny fitondrana, ny manam-pahefana, ny mpitandro filaminana, ny fitsarana ity trangam-piarahamonina ity. Maro ny endrin-javatra ahatarafan’ny olona toe-javatra tsy ara-drariny, ka lasa manala ny fony izy ireo rehefa misy ny ahafahany maneho izany. Ny mpitondra no iharan’ny fitsaram-bahoaka amin’ny farany…